• ကူးစက်မှုပေါင်း Coronavirus Cases: 576,878
• သေဆုံးသူပေါင်း Deaths: 26,423
• သက်သာသူပေါင်း Recovered: 129,991
အဆိုးဆုံး တိုင်းပြည် - ကူးစက်မှု - အသစ်တွေ့ရှိမှု - သေဆုံးမှု
1. USA 94,425 +8,990 1,429 +134
2. Italy 86,498 +5,909 9,134 +919
3. China 81,340 +55 3,292 +5
4. Spain 64,059 +6,273 4,934 +569
5. Germany 49,344 +5,406 304 +37
6. Iran 32,332 +2,926 2,378 +144
8. UK 14,543 +2,885 759 +181
9. Switzerland 12,311 +500 207 +15
10. S. Korea 9,332 +91 139 +8
မြန်မာနိုင်ငံ Myanmar စုစုပေါင်း 8 ယောက်၊ အသစ်တိုးလာ +3 ယောက်။
ကူးစက်ခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းခံစားရမယ်။
၁။ Fever ဖျား
၂။ Cough ချောင်းခြောက်ဆိုး
၃။ Shortness of breath အသက်ရှူခက်
တပတ်လောက်နေရင် အသက်ရှူမဝဖြစ်ရာကနေ ၂၀% လူနာတွေကို ဆေးရုံတင် ကုသရတယ်။ နာတာရှည်ရောဂါခံရှိသူ၊ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ရင်ပတ်နာ၊ ရင်ကြပ်၊ အသက်ရှူမဝ၊ နူမိုးနီးယား ဖြစ်တယ်။
Pre-existing conditions ရောဂါခံများ
• cardiovascular disease နှလုံးသွေးကြောရောဂါ
• diabetes ဆီးချို
• chronic respiratory disease နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းရောဂါ
• hypertension သွေးတိုး
တရုပ်ပြည်မှာ ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 72,314 ယောက်ကို ၁၁-၂-၂၀၂၀ နေ့က လေ့လာချက်အရ -
• 80.9% သာမန်သာခံစားရ။ တုပ်ကွေးလိုသာဖြစ်တယ်။
• 13.8% ဆိုးတယ်။ အသက်ရှူမဝ၊ နူမိုးနီးယားဖြစ်တယ်။
• 4.7% အခြေအနေဆိုးတယ်။ အသက်ရှူလမ်း အလုပ်မနိုင်တော့။
• 2% သေဆုံးတယ်။
တုပ်ကွေးနဲ့ အအေးမိတာလို နှာရည်ယိုတာ၊ နှာချေတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ ၅% မှာသာတွေ့ရတယ်။ ၈၀%တို့ဟာ သာမန်သာ ခံစားကြရတယ်။
နေ့ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်။